Fikarohana momba ny firaisana Ny drafitry ny fanahy, ny fanahy, ny fitondran-tena taloha ary ny fananganana fianakaviana indray ao amin'ny tantaram-piainan'ny Pertti Haikio | Samuel Helander - Fikarohana Reincarnation
From: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, nataon'i Ian Stevenson
Ireo ratra marobe & lozam-pifamoivoizana tao Pertti Haikio
Pertti Haikio dia teraka tamin'ny volana 3, 1957, tany Helsinki Finland. Ny reniny dia nanana anarana voalohany mitovitovy, Pentii, ary ny anaran-dreniny dia Anneli. Nanan-janaka vavy antsoina hoe Marja izy. Nanana ratra maro tao amin'ny fahazazany izy izay, ho hitantsika, nitarika fahatsiarovana na phobias tamin'ny taonjato manaraka. Ireto manaraka ireto izy ireo:
Taona 3: Nipoitra avy tao amin'ny tanan'i Anneli tao anaty lava-drano feno rano i Pertti. Pertti efa saika maty.
Age 4: Raha nijoro teo akaikin'ny tranobe fanorenana iray, dia nisy zavatra goavam-be nalain'i Pertti tao amin'ny tranobe fanorenana izay naratra ny tongony roa. Nentina hopitaly izy nandritra ny volana 5 ary voatery nanao diabe nandritra ny volana maromaro.
Age 5: Alika marary mafy Pertti.
Age 15: Nianjera tany Pelsi i Herninki ary nianjera tamin'ny gilasy, izay nipoaka. Efa saika maty tao anaty rano maizimaizina izy, saingy afaka nanaisotra ny kirarony sy ny akanjo ary nisintona ny tenany. Nody tany anaty akanjo izy. Taorian'ity toe-javatra ity dia nanana tahotra ny hisotro rano tao anaty rano i Pertti.
Perrti dia be fitiavana & milalao gitara
Na dia teo aza ireo trangan-javatra ireo, dia nanjary olon-tsotra sy tena tia be i Pertti. Nahazo gitara izy, izay tiany nilalao, ary nampiseho talenta mozika izy.
Tao 1969, i Anneli reniny sy Pennti, rainy dia nisara-panambadiana. Nanambady indray i Anneli tatỳ aoriana tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Reiner.
Fanahy iray sy fifandraisana ara-panahy amin'ny fahafatesan'i Perrti tampoka
Tamin'ny taona 18, tao 1975 dia maty tampoka i Pertti. Tamin'ny andro nahafatesany, ny reniny, Anneli, izay nitety fiaramanidina tamin'izany fotoana izany, dia nanana fanamarihana fa nisy olona tao an-trano nandao azy. Nodimandry i Anneli tao amin'ny efitranony, raha vao nahita ny rainy maty, izay nijanona mangina, avy eo dia nody. Nilaza tamin 'ny vadiny i Anneli fa midika izany fa nisy olona iray tao amin' ny fianakaviana dia nandeha tany amin 'ny tontolon'ny fanahy. I Pertti no nandao ny tontolo ara-batana ho an'ny tontolon'ny fanahy.
Drafitra fanahy sy fanahy: manana nofy manambara i Marja ary voasoroka ny fanalan-jaza
I Marja, i Pertii, rahavaviny dia nanambady lehilahy iray manana anarana mitovy amin'ny rainy, Pentti. Pentii Helander no anarany feno an'ny vadiny. Ny mpivady dia an'ny fiangonana loterana.
Herintaona na roa volana taorian'ny nahafatesan'i Pertti dia niseho tamin'ny nofy tamin'i Marja rahavaviny izy. Lasa bevohoka i Marja ary nieritreritra ny hanala zaza izy. Tamin'izany no nisehoan'i Pentii taminy tamin'ny nofy izy ary niteny hoe:
"Tazony io zaza io." (1)
Noho io nofy io dia navelan'i Marja hitohy ny vohoka. Nanana zazalahy izy, izay nantsoin'izy ireo hoe Samuel Helander.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha: i Samuel dia mamantatra ny tenany ho Pertti miaraka amin'ny kibony
Nanomboka niteny nandritra ny taona iray i Samoela. Raha 1 sy antsasany izy dia nanontany azy ny anarany. Namaly i Samoela hoe:
"Peltti." (2) Marja nanamarika fa tsy afaka nanononona ny "r" i Samuel, ka nihevitra izy fa hiezaka hiteny "Pertti".
Nilaza tamin'i Marja i Samuel fa tsy reniny. Nampiasa "reniny" kosa izy mba hilazana an'i Anneli, renibeny ary renin'i Pertti.
Tamin'ny taona 2 dia nahita sarin'i Pertii i Samuel fony izy nampidirina hopitaly noho ny ratra taminy. Hoy i Samuel: "Izao no aho rehefa marary ny tongotro." (3) Nilaza i Samuel tatỳ aoriana fa teo amin'ny fotaka ny tongony, izay nitranga teo amin'ny fiainan'i Pertii.
Manohy ity lamina ity, hatramin'ny taona 10, isaky ny hampiseho sary an'i Pertii i Samuel, dia nilaza izy hoe: "Izaho ity." (4)
Samoela Tsaroany ny mofomamy lava niainan'ny alika
Fotoana iray indray mandeha rehefa mijery sary, dia hoy i Samuel: "Tsaroako hoe oviana ilay alika no namatotra ny tongotro." (5) Naveriny imbetsaka io lohahevitra io, nanamarika ny nampalahelo azy rehefa nodidiana izy, na dia i Samoela aza, nandritra ny androm-piainany , dia tsy nalain'ny alika velively. I Pertti no nogadrain'ny alika rehefa niresaka momba ny 5 taona izy.
Nitsidika ny Fiainany taloha i Samuel & nilaza fa azy izany
Rehefa nalain'i Anneli tany amin'ny toeram-pandevenana izay nandevenana an'i Perti i Samuel, rehefa nibanjina ny fasan'i Pertti, dia naverimberin'i Samoela hoe: "Ity no fasako." (6) Rehefa noraisin'i Marja teo amin'ilay fasana iray izy, dia nanohy ny teniny indray i Samoela hoe: ho any am-pasako. "(7)
Ny fahatsiarovana ny fiainana teo aloha: i Samuel dia nahatsiaro ny antoko iray tamin'ny Fahatongavana ho nofo
Ao amin'ny fahatsiarovana izay voalaza etsy ambony, ny fisalasalana dia manolotra fa noho ny antony maro samihafa dia nahitana an'i Pertti ihany ny nahita ny sarin'i Pertti, Samuel. Ity fahatsiarovana manaraka ity dia maneho tena iray tena manan-danja, satria tena tsy dia fantany loatra ny nahalalan'i Samoela an'io zava-nitranga io tamin'ny fomba mahazatra.
Raha tokony ho tamin'ny 3 taona izy, dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny ny fotoana iray nahatongavany niaraka tamin'ny rainy tany amin'ny trano akaikin'ny kiosk. Nilaza izy fa nanao satroka maromaro izy ireo ary nitondra gitara. Nilaza i Samuel fa io tranobe io teo akaikin'ny kioska dia notifirina ary tsy maintsy nody izy ireo.
Tsy nifanaraka tamin'ny zava-nitranga tamin'ny fiainan'i Samoela io, fa tadidin'i Marja fa ny famaritan'i Samuel dia nifanandrify tamina tranga iray tamin'ny fiainan'i Pertti. Tamin'ny taona 1975, herintaona teo ho eo talohan'ny nahafatesan'i Pertti, nisy sakaiza nanao fety tao amin'ny trano iray akaikin'ny kiosin'ny lalamby. Nandeha tany amin'ny fety i Samuel sy ny rainy, saingy nisy afo nirehitra tao an-tampon'ity trano ity ary voatery niparitaka ireo mpanatrika.
Tsy nisy nanambara tamin'i Samoela, izay taonany tamin'izany fotoana izany ihany no 3, amin'ity tranga tsy mahazatra ity ao amin'ny fiainan'i Pertti Haikio. Amin'ny tenin'i Samuel rehetra, io no maharesy lahatra indrindra ho fahatsiarovana ny fiainany taloha, fahatsiarovana ny fiainany toa an'i Pertti Haikio.
I Samoela dia namantatra ny fiainany taloha
Indray andro dia nahita sarin'i Pennti sy Anneli Haikio, ray aman-drenin'i Pertti Haikio, i Samuel. Tsarovy fa i Anneli koa dia renin'i Marja sy ny reniben'i Samuel. Saripika an'i Pennti sy Anneli dia tsy dia hita loatra tao an-trano, raha toa ka nialona ny vadin'i Anneli, faharoa, i Reiner, ary tsy tiany ny sarin'i Pennti, vadin'ny vadiny voalohany.
Rehefa nandinika ny sarin'i Pennti Haikio i Samuel, dia nilaza hoe: "Ity no raiko." (8) Pennti, mazava ho azy, dia rain'i Pertii fa tsy Samoela.
Indray mandeha, raha nijery ny sarin'i Pennti Haikio sy Anneli i Samuel, dia hoy izy: "I Dada sy i Bebe ihany koa." (9) Indray, Pennti Haikio dia dadan'i Perrtii, fa tsy i Samuel. Anneli dia ny renin'i Pertii sy ny reniben'i Samuel.
Samy mahita ny fiainany taloha i Guitar, Corduroy Jacket ary Watch
Tsarovy fa tia mozika i Perrti Haikio. Taorian'ny nahafatesany dia napetraka tao anaty boaty iray ny gitara ary napetraka tao anaty sobika. Tsy nisy olona tao amin'ny fianakaviana nilaza tamin'i Samoela momba an'io gitara io. Na dia izany aza, Ian Stevenson dia manoratra, mikasika an'i Samuel sy ny gitara:
"Nitady izany izy, nahita izany ary nilaza fa izy no izy." (10)
Taorian'ny nahafatesan'i Pertti Haikio, ny akanjony rehetra dia nesorina afa-tsy ny akanjom-pandriana iray, izay notanana tao am-baravarana iray. Indray andro, i Marja, ny reniny ary i Anneli, renibeny sy ny renin'i Perrti dia nitondra azy nivoaka ary nifanakalo hevitra momba ny tokony hatao. Ny iray amin'izy ireo dia nanolotra hevitra fa tokony halefa izy.
Samoela, izay taona 3 taona tamin'io fotoana io ihany, dia nihetsiketsika sy niantsoantso ny reniny sy ny renibeny, nilaza fa ny jirony dia ny corduroy ary ny tsy tokony homena azy.
Nanam-bintana i Pertti izay tapaka ary tsy nisy tanana. Taorian'ny nahafatesan'i Anneli dia nametraka izany tao anaty fitoerany feno zavatra hafa nariana. Nosokafan'i Anneli indray mandeha ity fisakanana ity tao Pertti. Hitany ny fiambenana nopotehina ary nilaza izany izy, nilaza fa azy izany. Samy nitazona ny fiambenana teo ambany felany i Samuel taorian'izay, na teo anaty sambo teo am-pandriana, ka toa tsy nisy olona afaka naka azy raha avy aminy indray.
Ny fiainan'i Samuel's Life Phobia of Water
Nanana tahotra lehibe i Samoela mba handroana, ka hoy i Marja, renin'i Marja, fa "sahiran-tsaina" izy rehefa bandroina. Natahotra mihitsy aza i Samoela. Tsy natahotra ny rano intsony i Samoela mandra-pahatongany farafaharatsiny hatramin'ny taona 23. Na dia mbola olon-dehibe aza i Samoela, dia tsy handeha hilomano noho ny volony.
Tsarovy fa fony i Pertti dia 3 taona, dia niala teo amin'ny tanan'i Anneli izy ka nidona tao anaty lavadrano feno rano ary saika maty. Tamin'ny taona 15, dia nianjera tany Pelsi i Herninki ary nipetrapetraka teny amin'ny ranomandry. Izy koa dia saika nilentika tao anaty rano maizimaizina.
Ny tahotr'i Samoela ny rano dia toa mifandraika amin'ny zava-niainan'i Pertti izay efa saika maty, indray mandeha rehefa nilentika tao anaty koveta izy fony izy 3 taona taloha ary tamin'ny taona 15, fony izy nianjera tamin'ny rano mangatsiaka.
Fitondran-tena taloha: nanohitra ny fomba fanaovan'i Pertti ny fanorohana ny mpianakavy tsirairay amin'ny Krismasy
Pertti dia olona be fitiavana ary namorona fomban-drazana tany Krismasy izy, izay nandehanany manodidina ilay efitrano, nitazona ny sakaizany tsirairay ary nanoroka azy ireo teo amin'ny takolaka.
Tamin'ny vanim-potoana 2 1 / 2, dia nasehon'i Samuel ny fihetsika toy izany tamin'ny Krismasy, nitondra ny tanana tsirairay avy amin'ny fianakaviany ary nanoroka azy teny amin'ny takolaka.
Reincarnation & Physical Resemblance: Pertti sy Samuel dia manana endrika sy fihetsika mitovy
Marja, ny rahavavin'i Pertti sy ny renin'i Samuel, dia nanamarika fa nitsiky i Pertti sy i Samuel ary izy ireo dia mitovy ihany. Pertti dia nanana ny fironana mijoro eo amin'ny tongony iray eo alohany amin'ny tanany eo amin'ny valahany. Samy nanana ny toetrany mahazatra i Samoela. Samy nandeha an-tongotra niaraka tamin'ny tanany i Pertti sy Samuel. Tsy nanana fahazarana ara-batana i Marja.
Nino i Marja fa i Samoela no teraka indray ao Pertti
Raha ny zava-niainany sy ny fijeriny dia nanjary nino i Marja fa i Samuel zanany no rahalahiny nodimandry, Pertti reborn.
Fianakaviana fanambadiana mitovy: Pertti indray no niorina indray tamin'ny naha-zanaky ny rahavaviny, Marja, hiverina amin'ny fianakaviany. Ireo tranga rehetra momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana hafa dia mitambatra manomana ny fanahy avy amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny fahatongavana ho nofo.
Drafitra fanahy sy fanahy: Pertii, avy amin'ny tontolon'ny fanahy, nanome an'i Marja fanambarana fanambarana, nanoro hevitra azy tsy hanala zaza. Nanao izany i Pertti rehefa nikasa ny hiverina indray amin'ny maha-zaza an'i Marja, izay hantsoina hoe Samuel.
Ny ohatra iray amin'ny toe-tsaina iray hafa dia mikasika ny renin'i Anneli, renin'i Pertti, izay nivezivezy tamina fiaramanidina fony izy nahita ny rainy maty, izay nijanona mangina, avy eo dia nodded. Nilaza tamin 'ny vadiny i Anneli fa midika izany fa nisy olona iray tao amin' ny fianakaviana dia nandeha tany amin 'ny tontolon'ny fanahy. I Pertti no nandao ny tontolo ara-batana ho an'ny tontolon'ny fanahy.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Samy nandroaka sy nilomano i Samuel, izay toa hita fa nahatonga an'i Pertii nijanona tao anaty koveta iray tamin'izy telo taona ary rehefa nilatsaka rano mangatsiaka izy fony izy 15 taona.
Fitoviana ara-batana: Marja, rahavavin'i Pertti sy renin'i Samuel, dia nanamarika fa i Pertti sy i Samuel dia samy nanana tsikera mitovy, ny vatany iray ihany ary ny fironana mijoro amin'ny tongotra iray eo anoloan'ny iray hafa miaraka amin'ny tanany eo amin'ny valahany, ary ny mandeha an-tongotra any aoriana ny lamosiny. Noho io tranga io, dia mety ho vokatry ny fototarazo fotsiny ny fitoviana ara-batana.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 152
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 154
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 153
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 155
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 155
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 156
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 156
8. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 156
9. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 155
10. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 155